Iziganeko zango-Okthobha 25, 2021-Oyoun | Inkcubeko yokucinga kwakhona
Iziganeko zokukhangela kunye neembono, ukuhamba
Ngenisa igama eliphambili. Khangela igama eliphambili lemicimbi.
Fihla icebo lokucoca ulwelo
Ukujonga umbono wokuhamba
Utshintsho kumangenelo efom aya kuhlaziya uluhlu lweziganeko ngeziphumo ezihluziweyo
Icebo lokucoca ulwelo xa uvula	Icebo lokucoca ulwelo xa kuvalwa
Icebo lokucoca ulwelo xa kuvalwa
25.10.2021	Oktobha 25, 2021
22. uOktobha - 30. uOktobha
Umqolo - سند الظهر - Umboniso
I-Oyoun	ULucy-Lameck-Strasse 32, eBerlin
"Umqolo" ngumboniso weendlela ezininzi ngumculi waseLebanon uMazen Khaddaj. Umboniso yingqokelela yemidlalo yevidiyo, ukufakelwa kweendlela ezininzi, kunye namaxwebhu abonisa ubudlelwane noyise, kunye [...]
Okthobha 8, 10:00 - Okthobha 31, 18:00
NDijonge: ISyria kwiFoto nakwiNgcaciso-iMiboniso yoMfanekiso
Uqhushululu lwaseSyria kunye nemfazwe eyalandelayo mhlawumbi iphakathi kweziganeko ezibhaliweyo ezibonakalayo kwimbali yanamhlanje. Kukho imifanekiso ephazamisayo enokufumaneka kwi-psyche yabantu [...]
Okthobha 25, 19:00 - 21: 00	 Ukuqeshwa kothotho
Iqela lokuFunda: Ubufazi obuNtsundu (s) x IPalestine
Ukufundwa kunye neqela leqela eliphindwe kabini ngenyanga kwi-intanethi kwaye liqhutywa liQela loPhando ngeeNtshukumo (amagcisa kunye nabaphandi u-Izdihar Afyouni kunye ne-melissandre varin) njengenxalenye yenkqubo yeNgaphandle [...]